के बलिउड कि यी चर्चित सुन्दरी नायिका संग कारण जोहरको बिहे हुदैछ ? – List Khabar
Home / मनोरंजन / के बलिउड कि यी चर्चित सुन्दरी नायिका संग कारण जोहरको बिहे हुदैछ ?
admin January 19, 2022 मनोरंजन Leaveacomment 67 Views
बलिउड अभिनेत्री परिणीति चोपडा यतिबेला फिल्मी दुनियाबाट टाढा छिन् । तर सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छिन् । उनी बारम्बार आफ्ना तस्विर शेयर गर्छिन् । परिणीति लाई फ्यानहरुले उनको विवाहको बारेमा निकै प्रश्न सोध्ने गरेको देखिन्छ । फ्यानहरु उनको विवाहको प्रतिक्षामा छन्, यसैबीच हालै उनको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
जसमा नायिका आफ्नो विवाहको बारेमा कुरा गरिरहेको देखिएकी छिन् । भिडियोमा परिणितीको कुरा सुन्दा उनी विवाहका लागि निकै उत्साहित छिन् र छिट्टै विवाह गर्न चाहन्छिन् । वास्तवमा परिणीति आगामी दिनमा कलर्सको शो ‘हुनरबाज’ मा देखिदैछिन् । जसमा उनी धेरै प्रतिभाको सीप पहिचान गर्ने जजको रुपमा देखिनेछिन् । यस क्रममा उनीसँग जजको सिटमा चर्चित निर्देशक करण जोहर र दिग्गज कलाकार मिथुन चक्रवर्ती पनि रहनेछन् ।
हालै यो शोको प्रोमो सार्वजनिक गरिएको छ । जुन कलर्स टिभीले आफ्नो इन्स्टाग्राम पेजबाट सेयर गरेको छ । जुन सामाजिक सञ्जालमा आउनेबित्तिकै भाइरल भएको छ । अहिले किन शोको क्रममा परिणीतिको बिहेको कुरा बाहिर आयो भनेर अचम्ममा पर्नु भएको होला । त्यसोभए तपाईलाई बताउन दिनुहोस् कि यस समयमा करण जोहर भन्छन् कि उनी प्रायः जोडीहरूको लागि धेरै भाग्यशाली साबित भएका छन्। उनले धेरै मानिसहरूलाई म्याच मेकिंग गरेका छन् ।
जुन पछि सफल साबित पनि भएको छ। यसबारे परिणितीले अरुको म्याच मेकिङ गरेको भए पनि आफ्नो बिषयमा त्यस्तो नहुने बताइन् । परिणितीको यो गुनासोमा करणले केही समय पर्ख र के हुन्छ हेरौँ भन्छन् । त्यसपछि यो वर्ष उनीहरुको सम्बन्ध पनि पक्का हुने बताइएको छ । करण र परीको यो कुराकानीको बीचमा भारती सिंह र उनका पति हर्ष लिम्बाचिया प्रवेश गर्छन् ।
जसमा कमेडी क्वीनले अब कलर्सले परीसँग सम्बन्ध खोज्ने बताएकी छिन् । जस पछि करण जोहर प्रतियोगीहरुसँग परीको कनेक्सन देखिरहेका छन् । यसैबीच उनले राकेश नामका प्रतियोगीका बारेमा परीसँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको बताएका छन् । आज उनी यहाँबाट एउटै घरमा नजाने पनि बताइएको छ । यी सबै कुरा शोको प्रोमोमा देखाइएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो शेयर गर्दै यस्तो लेखिएको छ । यस्तै रियालिटी शोको कुरा गर्ने हो भने यो २२ जनवरीबाट सुरु हुँदैछ । दर्शकले शनिबार र आइतबार राति ९ बजे कलर्समा हेर्न सक्नेछन् । शोको प्रोमो निकै रोचक छ । यस्तो अवस्थामा शोलाई लिएर फ्यानमा उत्साह बढेको छ ।
Previous आजबाट बदलियो यी ४ राशिको भाग्य : मिल्नेछ शत्रुबाट छुटकारा, प्रशस्त धन लाभ
Next काेभिडबाट श्वास फेर्न गाह्रो भयो ? तुरून्त अपनाउनुस् यी १६ उपाय